Compressor Ac fiara
Compressor Mahindra Ac
Fitoerana familiana herinaratra
Serivisy tsara indrindra kalitao tsara indrindra
Afaka mamokatra compresseur TM13-TM31 izahay
raikitra & Famindrana miovaova
Mamokatra raikitra izahay & compresseur famindrana miovaova.
Rack familiana herinaratra matihanina amin'ny vidin'ny orinasa
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpanamboatra Rack hidraulika matihanina indrindra, Berlin dia manampahaizana manokana amin'ny famokarana compressors amin'ny rivotra sy fiara fitaterana. Ny vokatra familiana dia misy kalitaon'ny fanodinana rivotra. Ny mari-pana amin'ny atmosfera sy ny hamandoana dia namboarina ho fitoviana ara-dalàna.
Ambongadiny familiana fiara sy famolavolana fiara elektrika tsara indrindra
Te hahita orinasa mpamily fiara manome familiana herinaratra avo lenta ve ianao? Zahao ity horonan-tsary ity ary fantaro ny antsipiriany misimisy momba ny familiana familiana ESP And Electric amin'ny vidiny ambongadiny avy any Guangzhou BERLIN Parts Manufacturing Co., Ltd.
& serivisy aorian'ny fivarotana ho an'ny faritra AC
& Fitaovana familiana
Manana R mahery sy za-draharaha tokoa isika
& Ekipa D sy QC tarihan'ny injeniera japoney manana traikefa 40 taona mahery
amin'ny compressor, manolotra serivisy OEM sy serivisy aorianay izahay. Azontsika atao ny mamolavola sy manamboatra compresseur avy amin'ny 110cc-450cc, izay azo ampiasaina amin'ny fiara mpandeha, fiara injeniera ary kamio vata fampangatsiahana. Raha tsy mahita ny vokatra ilainao amin'ny tranokalanay ianao, aza misalasala mifandray aminay, dia hanamarina anao izahay. Raha tsy manana ny vokatra ilainao izahay dia afaka mivoatra ho anao araka ny fangatahanao Afaka manolotra sary sy santionany izahay hamafiso.
Ekipa injeniera japoney
manana traikefa 40 taona mahery
Nandalo ny IATF16949 izahay
Manome fiara OE izahay
Ny vokatra azonay dia nahazo mari-pankasitrahana maro momba ny kalitao sy ny fanavaozana
Guangzhou BERLIN Auto Parts Manufacturing Co., Ltd, natsangana tamin'ny taona 2006, dia orinasa maoderina manokana amin'ny famokarana compressors amin'ny rivotra mandeha amin'ny fiara. Ny orinasanay dia miorina ao amin'ny Zhuliao Industrial Zone Baiyun Distrikan'i Guangzhou City, manakaiky ny velaran-tany 20 hektara sy ny velaran'ny zavamaniry mihoatra ny 10.000 metatra toradroa. Izy io dia miaraka amina fitaterana mety miaraka amin'ny 5KM miala ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Baiyun ary mpiasa mihoatra ny roanjato ahitana teknisianina matihanina maherin'ny 50. Ho fanampin'izay, manana R tsy miankina ihany koa isikaEkipa & ekipa D sy mpivarotra matihanina miandry ny hanomezana tolotra tsara indrindra ho anao.
Ny ekipa dia manana ekipa fitantanana avo lenta. Nandany ny fanamarinana IATF16949 izy ary iray amin'ireo mpanamboatra anatiny no mandeha ho azy tanteraka. Izy io dia nanolotra karazana fitaovana fanandramana sy fanandramana mandroso izay ahitàna ny tsipika fivorian'ny solosaina Japoney feno, ny ivon-toeran'ny milina, ny dabilio fitiliana any Taiwan, ny mpitsikilo helikaly helika, ny milina fanadiovana ultrasonika, ny fitaovana fampidiran-drivotra, ny fitaovana fandrindrana sy ny fandrefesana, ny mikraoskaopy metalyorika, ny fitaovana fandrefesana pneumatic , fitsapana hovitrovitra, milina fanandramana masira sns .. Manana fifehezana kalitao henjana izahay amin'ny faritra rehetra noforoninay. Izahay dia manana fifehezana teknolojia sy fitantanana ny fandrefesana santionany sy ny sarintany, ny fampandrosoana ny bobongolo, ny fanodinana banga, ny fitsapana fahombiazana.
Manana karazana vokatra telo izahay izay Compressor famindrana miovaova miovaova ao anaty, Compressor azo ovaina azo ovaina ivelany sy mpibaiko mivaingana mifindra. Miezaka ny hahazo ny fankatoavan'ny mpanjifanay sy ny fahatokisanay amin'ny kalitao miorina, ny vidin'ny fifaninanana ary ny serivisy tena tsara izahay. Ny vokatra dia aondrana any Eropa, atsimo sy avaratra Amerika, afovoany atsinanana sy atsimo atsinanan'i Azia sns.
Manaraka ny tanjon'ny "fototry ny fampandrosoana amin'ny kalitao, ny laza miantehitra amin'ny fahatokisana" sy ny fitsipiky ny fitantanana ny "hamoronana lanja ho an'ny mpanjifantsika, ny mpiasa ary ny mpiara-miombon'antoka aminay" dia hovainay ny teknolojia avo lenta ho vokatra avo lenta hanompoana ny fiarahamonina sy manampy amin'ny fampandrosoana ny indostrian'ny fiara sinoa.
Mpiasa ao amin'ny orinasa
Vahaolana fanao OEM
Kalitao azo antoka hihaonana amin'ny fangatahan'ny mpanjifanay
Ny vokatray dia aondrana any Eropa, atsimo sy avaratra amerikana, afovoany atsinanana sy atsimo atsinanan'i Azia sns. Manana mpanjifa erak'izao tontolo izao izahay. Ny compressorantsika dia vaovao avokoa, ny singa rehetra dia avy amin'ny mpamatsy OE miaraka amin'ny antoka iray taona. Mpamatsy OE amin'ny ozinina Car izahay.
Manana traikefa 14 taona mahery amin'ny famokarana sy ny famolavolana ny familiana izahay. Izahay koa dia manome ny marika familiana ambony any Amerika Avaratra sy Russia.
MIARAKA AMINAY US
Azafady mba avelao ny fampahalalana mifandraika aminao, hanolotra serivisy VIP iray ho anao izahay tsy ho ela.